तपाईको बारेमा ८ सत्यहरु जसलाई आत्मसात गरेर आत्मविश्वासी जीवन बाँच्नुहोस् - उज्यालो पाटो
लेख सुरु गर्नु भन्दा पहिले एउटा पौराणिक पात्रको बारेमा भन्न चाहन्छु । त्यो पौराणिक पात्रको बारेमा तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ । ति हनुमान हुन् । उनमा गजबको क्षमता थियो । उनी जे पनि गर्न सक्थे । त्यति बलिया थिए तर दुखको कुरा के भने, उनलाई आफ्नो शक्तिको बारेमा थाहा थिएन ।
कुरा के भएको थियो भने सानो छँदा हनुमान अचम्मै चकचके थिए तर बलिया भने अद्धितिय । सानो मान्छेमा भएको अत्याधिक बलले उनलाई झन् चकचके बनाइदियो । उनी ठुला ढुङ्गाहरु मात्र होइन, खेल्दै रमाइलो गर्दै अजंगका रुखहरु पनि उचालेर पर परसम्म फ्याल्थे । उनको यो क्रिया दुरुस्तै त्यस्तै हो, जस्तो साना केटाकेटी बगैचामा गएर फूल र बिरुवाहरु कौतुहलतापुर्वक उखेल्ने र फ्याल्ने गर्छन् ।
तर हनुमानले उखेलेर फ्याल्ने ठुला रुखहरु हुन्थे । ति रुखहरु कहिले ऋषीहरुको आश्रममा पुग्थे र ऋषीहरुका आश्रम भत्काइदिन्थे । ध्यानमा बसिरहेका ऋषीहरुको भागाभाग चल्थ्यो । यति हुँदाहुँदै पनि ज्ञानवान ऋषीहरु सबै सहन्थे । कसैले हनुमानलाई सम्झाउँने वा थर्काउँने गर्न सकेनन् ।
एकदिन अति भयो । ध्यानमा बसिरहेका मतन ऋषीको आश्रममा आएर ठुलो रुख बजारियो । आश्रम भत्कियो । ऋषीको ध्यान भड्कियो । ऋषी भड्किए । तत्कालै हातमा पानी लिएर हनुमानलाई श्राप दिए, “तिम्रो यो अद्धितिय बलको बारेमा तिमीलाई थाहै नहोस् । तिमी जिम्मेवार हुने उमेरमा कसैले सम्झाइदिए पछि चै सबै फिर्ता होस् ।”
हनुमानले आफ्नै सामर्थ्य बिर्से । अब हनुमान अरु औसत बानरहरु जस्तै भए ।
अहिले हनुमान भेटिदैनन् । मतन ऋषी मरिसके । तर हाम्रो समाज मतन ऋषी जस्तो भएर बसेको छ । हामीलाई सानै देखि हाम्रो क्षमताका बारेमा अवमुल्यन गर्न सिकाउँछ । तैले यो गर्न सक्दैनस्, तैले यसो गर्नु हुदैन । जस्ता असाध्यै धेरै बन्धनहरु हाम्रो दिमागमा भरेर हामीलाई अड्चन दिन्छ । र, हामी हनुमान जस्तै आफ्नै क्षमता बिर्सन्छौँ ।
नत्र हामीमा असाध्यै धेरै सामर्थ्य छ । यहाँ म त्यस्तै क्षमताका बारेमा कुरा गर्दैछु, जुन असाध्यै औसत भनिएका मानिसहरुसँग पनि हुन्छ । यो क्षमता तपाईसँग पनि छ र मसँग पनि छ । कुनै क्षमताहरु बढाउँन अभ्यासको जरुरत पर्छ । नियमित अभ्यास र लगनशिलताले ति क्षमताहरु थपिन्छन् तर क्षमता हुने चै आफै भित्र हो ।
१. तपाई आफुले सोचे भन्दा बलियो हुनुहुन्छ
माथिको कथामा भनिसकेँ कि समाजले हामीमा भएको क्षमतामा बिर्को लगाइदिन्छ । समाजका सबै कुरा नटेरेर अराजक हुने भन्ने धारणा मेरो पनि होइन तर हामी समाजका पुरातन र परम्परागत ढाँचामा मात्रै बाँचिरह्यौ भने आफ्नो क्षमताका बारेमा हनुमानलाई झै आफैलाई थाहा हुदैन । यसैले त्यो सिमा भन्दा बाहिर निस्किनै पर्छ ।
हामी जस्तै मान्छेहरुले समाजमा गर्न नसक्ने भन्ने कुराहरु गरेको हामीले देखेकै छौँ । हामीसँगै पढ्ने साथी जसको पढाइ औसत थियो, त्यसले मास्टर्स सकेर राम्रो काम गर्दैछ ।
ताप्लेजुङको एउटा सानो दुर्गम गाउँबाट निस्केर सन्दुक रुइतले संसारभरका लागि आँखाको अपरेसन गर्ने नयाँ प्रबिधि दिएर लाखौँलाई संसार हेर्न सक्ने बनाए ।
क्षमतालाई ताप्लेजुङको बाटो नपुगेको गाउँको पहाडले छेकेन । तपाईको जीवन पनि यस्तै हो । आफु भित्रको क्षमता देख्नुहोस् । तपाई आफुले सोचे भन्दा पनि बलियो हुनुहुन्छ । हिम्मतको मात्रै आवश्यकता हो । त्यसलाई सदुपयोग गर्नुहोस् ।
२. तपाई आफुले सोचे जस्तो कमजोर हुनुहुन्न
समाजले हाम्रो क्षमता रोक्दैन मात्रै, उल्टो हाम्रो कमजोरीलाई पहाड बनाएर देखाउँछ । बारम्बार हामीले हाम्रो कमजोरी मात्रै देखिरहे पछि हामी स्वयम आफु कमजोर नै छु भन्ने मान्न थाल्छौँ ।
हाम्रो नेपालको सानो उदाहरण हेरौँ । अस्ति भर्खरसम्म असाध्यै भनेको लोडसेडिङ जनार्दन शर्मा र कुलमान घिसिङको जोडीले सकेर देखायो तर यस्तो होला भन्ने कसैले पनि सोचेको थिएन । हामीलाई लाग्थ्यो, भ्रष्टहरु घेराबन्दीमा एकदुई जना असल मान्छेहरुले मात्रै चाहेर केहि गर्नै सक्दैनन् तर हेर्नुस् त परिणाम ! अहिले प्राबिधिक समस्या बाहेकको अवस्थामा बत्ति हुन्छ । लोडसेडिङ भनेर बिजुली नपुगेर लाइन काट्न पर्दैन ।
यसैले भनिए जस्तो वा सोचे जस्तो कमजोर तपाई हुनुहुन्न । कोही एकजनाको सम्बन्धको कारणले मात्रै तपाई सामर्थ्यवान भएको हुनुहुन्न । तपाईमा क्षमता भएर नै तपाईले केहि गरिरहनु भएको छ वा गर्न सक्नुहुनेछ ।
३. तपाईको विगतमा जस्तो तपाई हुनुहुन्न र तपाईको विगत नै तपाईको भविष्य होइन
पक्कै पनि, तपाईको विगतमा जस्तो तपाई हुनुहुन्न र तपाईको विगत नै तपाईको भविष्य होइन । तपाईको विगत, राम्रो या नराम्रो जे जस्तो भए पनि तपाईले त्योबाट पाठ सिक्नु भएको छ । राम्रो विगत हुनेको त्यहि विगत सम्पति भयो । नराम्रो विगत हुनेको त्यो भोगाइ र पाठ सम्पति हो ।
त्यति भोगिसके पछि तपाईको ज्ञान वा क्षमता त्यति मात्रै रहदैन जति विगतमा थियो । अनि, तपाईको भविष्य पुर्णरुपमा विगतमा मात्रै आधारित हुदैन । यदि विगतमा जे थियो, सँधै त्यहि रहिरहने भए झापामा सामान्य किसानको छोरो केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने थिएनन् । (नोट : यो राजनीतिक कुरा होइन । ओलीका राजनीतिक पृष्ठभुमि, सिद्धान्त वा गतिबिधीसँग यो पोस्टको लिनुदिनु छैन । केवल सामान्य किसानको छोरो प्रधानमन्त्री बन्नु चानचुने कुरा होइन भन्ने उदाहरण मात्रै हो ।)
यसैले अस्ति नै खराब भयो, अब पनि खराब हुन्छ भन्ने हुदैन ।
४. कसैले पनि तपाईको समस्या समाधान गर्दिदैन
तपाईको जिन्दगी हो । यसमा भोग्ने र पाठ सिक्ने जिम्मा तपाईको हो । तपाईलाई अरुले जानकारीसम्म दिन सक्छन् । तपाईलाई अरुले सामान्य सहयोग सम्म गर्न सक्लान् तर सम्पुर्ण बाटो हिड्नु पर्ने तपाईले हो । सो बाटोमा भेटिएका समस्या पनि तपाईका निजि हुन् ।
तपाईले समाचारमा पढ्नुहुन्छ, हरेक दिन मानिसहरुको मृत्यु हुन्छ तर के ति सबै मृत्युमा तपाईलाई त्यति नै शोक हुन्छ, जति परिवारका कसैको सानो दुर्घटनामात्रैमा पनि हुन्छ ? व्यवहारिक भएर, सत्य भन्दा पक्कै पनि हुदैन । किनकी, आफ्नो भनेको आफ्नो हो । समस्या पनि त्यस्तै हो ।
तपाईको समस्याले तपाईलाई जति अनुभुति दिन्छ, त्यति सघन संसारमा अरु कसैलाई दिनै सक्दैन । त्यसैले तपाईका लागि कसैले तपाईको समस्या समाधान गर्दिदैन । तपाई स्वयमले समाधान गर्नु पर्नेछ ।
५. आफ्नो जिन्दगीलाई कता मोड्ने भन्ने सामर्थ्य तपाई स्वयमसँग छ
तपाई आर्थिक रुपमा कमजोर अवस्थामा हुनुहुन्छ । तपाईले त्यति धेरै पढ्न सक्नु भएन । बाहिर जानलाई भिसा पनि लागिरा छैन । तपाई स्वस्थ हुनुहुन्न । यी भनिएका सबै कुरा भए पनि तपाई अझै पनि तपाईले सोचे जस्तो कमजोर हुनुहुन्न ।
तपाई जस्तो अवस्थामा भए पनि तपाईको जिन्दगी अगाडी बढ्ने राम्रो बाटो र खराब बाटो सँधै रहन्छ । त्यो बाटो मध्ये कुन बाटो हिड्ने भन्ने निर्णय तपाई स्वयमले गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईको निर्णयले नै तपाईको जीवनले बाटो समात्ने हो ।
६. आफुलाई सम्मान गर्नुहोस् र सम्मान खोज्नुहोस्
आफ्नो विचार र पुर्णरुपमा आफ्नो सम्मान गर्नुहोस् । संसारमा हरेक मानिस अरु भन्दा भिन्न छ । भिन्न हुनुको अर्थ हो, संसारमा हरेक मानिस अरु मानिस भन्दा फरक क्षमताको छ । आफुलाई अरुसँग तुलना गरेर आफ्नो अवमुल्यन नगर्नुहोस् । आफ्नो क्षमताको सम्मान गर्नुहोस् र आफुलाई हिनभावबाट टाढा राख्नुहोस् ।
त्यस्तै अरुबाट पनि सम्मान खोज्नुहोस् । सम्मान खोज्नुको अर्थ मपाइ हुनु पनि होइन । सम्मान खोज्नुको अर्थ जबरजस्ती सम्मान गर् भन्नु पनि होइन । सम्मान आर्जन गर्ने कुरा हो । र, सम्मान आर्जन गर्ने पहिलो शर्त हो, अरुको सम्मान गर्नु । अरुको सम्मान गर्दा आफ्नो अपमान हुने होइन, बरु तपाईको संस्कार देखाउँछ । मानिसहरुमा तपाई प्रतिको सम्मानभाव बढ्छ ।
७. विनाशर्त तपाईलाई माया गर्ने मान्छे भेट्नुहुनेछ
र, आफ्नो जीवनसाथी कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले मानिसको सुखदुख फरक पर्छ । कुनै कारणवश तपाईलाई माया गर्ने मान्छेहरु पुर्णरुपमा तपाई प्रति समर्पित हुदैनन् । त्यस्तै कुनै कारणले आफु पनि कोही अरुप्रति आकर्षित हुन सकिन्छ । त्यस्तोमा आफुले भेटेको मान्छे आफुले खोजेको त्यो एउटा मान्छे हो कि होइन भन्ने थाहा पाउँनु पर्छ ।
नथाक्नुस् । पवित्र मनले पर्खनुहोस् । संसारमा तपाई जस्तै भावना भएको मान्छे खोजिरहेको अर्को कोही पक्कै हुन्छ । तपाईले भेट्नु हुनेछ ।
८. जिन्दगीलाई माया गर्नुहोस्, फिर्तामा कुनै दिन जिन्दगीले पनि माया गर्छ
नमस्ते, म गणेश कार्की । एउटा आममान्छे । सामाजिक सञ्जाल मात्रै होइन, हाम्रो समाज नै नकारात्मक खबर र जानकारीहरुले भरिएको छ । ‘नकारात्मक मात्रै बिक्छ’ भन्ने सोच व्याप्त छ । यस्तोमा सकारात्मक कुरा लेखेर पनि व्यवसायिक हुन सकिन्छ भन्ने उदाहरण देखाउँने मेरो सानो प्रयास हो । उज्यालो पाटोमा म जीवनको उज्यालो पाटोको बारेमा लेख्छु । अथवा, जीवनलाई उज्यालो पाटोमा कसरी लैजाने भन्ने बारेमा आफुले देखेका भोगेका र पढेका कुराहरु बाढ्नेछु । सामाजिक सञ्जालमा अलिकति भए पनि सकारात्मक र ज्ञानवद्धर्क कुराहरु सेयर हुन योगदान गर्न सकुँ । यस्ता कुरा पढ्न चाहनेले पढ्ने ठाउँ बनोस् । यस्ता कुरा लेख्न सक्नेहरु व्यवसायिक रुपमा लेख्ने हिम्मत गर्न सकुन् । मेरो इच्छा यति हो । यो भन्दा धेरै हाशिल भए म झन् खुसी हुनेछु । मलाई फेसबुकमा, ट्विटरमा भेट्न सक्नुहुनेछ । मेरो बारेमा थप जानकारी यहाँ पाउँनु हुनेछ ।
गणेश कार्की – who has written 51 posts on उज्यालो पाटो.